के हो लुतो ? उपचार बिधि र बाँच्ने उपाय
लुतो एउटा छालाको रोग हो जसले तपाइको छाला चिलाउने हुन्छ। यो एक किसिमको सुक्ष्म किरा (mites) को कारणबाट हुन्छ जसले तपाइको छालामा घुसेर अण्डा (फुल) पार्दछन। यो रोग कसरि लाग्छ? यदि तपाइलाइ लुतो छ भने यो अरु कसैबाट सरेको हुनसक्छ। यो रोग संगै बस्ने वा शरीरको हिमचिम द्वारा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्दछ। अथवा हुन् सक्छ कि यो तपाइलाई लुतो लागेका व्यक्तिको लुगाकपडा को स्पर्श वा प्रयोगबाट सरेको होस्। शरीर चिलाउने बाहेक यो रोगका लक्षण के के हुन्छन? अँ, यो रोगका अरु लक्षण पनि हुन्छन तर मुख्य भनेको चिलाउने नै हो। लुतो लागेमा प्राय व्यक्तिको शरीरमा सानासाना राता घाउ /डाबर हरु देखा पर्छन। कहिले काही यस्तो घाउँ /डाबर नदेखिन पनि सक्छन। कुनै कुनै व्यक्तिमा भने लुतो का सुक्ष्म किराहरु लुकेर बसेका प्वाल/छिद्र हरु नै छालामा देख्न सकिन्छ।
सामान्यतया लुतोले धेरै प्रभावित हुने अंगहरु यी हुन्।
●औलाहरु तथा औलाका काप हरु (The fingers and webbing between the fingers) ●नाडीको वरिपरिको छाला, कुहिना र घुडा ओरिपरि (The skin folds around the wrists, elbows, and knees)
●काखी (The armpits)
●स्तन को मुन्टो ओरिपरिको भाग (The area around the nipples (especially in women)) ●कम्मर /पुठ्ठा को भाग (The waist)
●पुरुषमा लिङ्ग तथा अण्डाथैली को क्षेत्र (The penis and scrotum (in men)
●नितम्बको तल्लो भाग तथा जंघा /तिघ्रा को माथिल्लो भागमा (The lower buttocks and upper thighs)
●खुट्टाको छेउ तथा पैतालातिरको भाग (The sides and bottoms of the feet)
के मैले डाक्टर अथवा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी लाइ भेट्नुपर्छ?
अँ तपाइले डाक्टर / नर्स अथवा अन्य जानकार स्वास्थ्यकर्मी लाइ भेटेर यो लुतो नै हो कि होइन सल्लाह लिनुपर्छ। यदि लुतो रैछ भने डाक्टरले तपाइलाइ औषधि लेखिदिनेछन जसले लुतो निको हुन्छ। तपैले कन्याइराख्नुभो भने घाउहरु मा संक्रमण (infections) हुन सक्छ। लुतो कसरि उपचार गरिन्छ ? डाक्टरले तपाइलाई प्रेसक्रिप्सन दिनेछन जसमा लुतोको किरा मार्ने औषधि लेखिएको हुनेछ। साधारण तया यसको लागि "permethrin" भन्ने औषधि दिईन्छ। यो एउटा क्रिम अथवा लोसन (cream or lotion) को रुपमा पाइन्छ र तपैले आफ्नो छालामा लगाउनु पर्छ। यो औषधि लगाउँदा तपाइको डाक्टरले भनेजस्तै ठ्याक्कै दुरुस्तै लगाउनुपर्छ अन्यथा यसले काम गर्दैन। के लुतोको लागि खाने औषधि उपलब्ध छैन ? लुतो मार्ने औषधि को खाने चक्की पनि पाइन्छ (ivermectin) तर यो त्यसै किन्न पाइदैन यसका लागि तपाइलाई डाक्टरले डोज हिसाब गरेको प्रेसक्रिप्सन आवश्यक हुन्छ। गर्भवती भएको बेलामा यो चक्की खान हुदैन।
यदि तपाइको लुतोको उपचार हुदैछ भने तपाइको डाक्टर ले तपाइलाई मात्र नभएर तपैसंग (घरमा) बस्ने अरुलाई पनि उपचार चाहिने सल्लाह दिनेछन। लक्षण नदेखिएको भए पनि उनीहरुलाई पनि लुतो को किराले आक्रमण गरिरहेको हुन सक्छ। उपचार गर्दाखेरी तपाइलाइ दिइएको क्रिम औषधि घाँटी देखि तल शरीरको सम्पूर्ण भागमा सबै लुगा खोलेर मजासँग लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो काम सुत्नुपुर्ब गरे राम्रो। त्यसपछि कम्तिमा आठ घण्टा पछि (भोलिपल्ट बिहान उठेर) राम्रोसंग नुहाउने र नया लुगा लगाउने। अनि पहिलेको सबै लुगा धोएर कडा घाममा राम्रोसंग सुकाउने। सबै लुगा भन्नाले तपाइँ तथा तपाइको घरमा/परिवारमा बस्ने सबैले गएको ४-५ दिनमा लगाएको लुगा तथा सम्पूर्ण तन्नाहरु/कम्बलहरु तौलियाहरु धुनु आवश्यक हुन्छ। यदि तपाई को बच्चालाइ लुतोको उपचार गरिदै छ भने उसले खेल्ने कुकुर/बिरालो लाइ पनि औषधि लगाएर नुहाइदिनुस। लुगा कपडालाई ड्राइ क्लिनिङ्ग गरेर पनि त्यसमा भएको लुतोकिरा लाइ हटाउन सकिन्छ। यदि कुनै गद्दा वा अन्य लुगाकपडा धुन अथवा ड्राइ क्लिनिङ्ग गर्न सकिन्न भने त्यसलाई एउटा प्लास्टिक झोलाभित्र हालेर ४ दिनसम्म हावा पनि नछिर्ने गरेर बन्द गरेर राख्नुहोस। यति समयसम्म छालामा बस्न नपाएपछि यी लुतोकिराहारू मर्न मर्छन।
चिलाउने समस्या कम गर्न मा के गर्न सक्छु?
तपाइले यसको लागि antihistamine समहको औषधि लिन सक्नुहुन्छ। यी तिनै औषधि हरु हुन् जुन एलर्जी को लागि पनि प्रयोग गरिन्छन। यो चिलाउने समस्या लुतोकिराहरु मरिसकेपछि पनि कैयौं हप्तासम्म रहिरहन सक्छ। तपाइको डाक्टरले क्रिम दिन सक्नुहुन्छ जसलाइ स्टेरोइड पनि भंनिन्छ। यसले चिलाउने भएर जान्छ। तर यो खाने स्टेरोइड होइन र आत्तिहाल्नु पर्दैन। यसले सुन्निएको पनि घटाउछ। बच्चा लाइ कति दिन्पच्ची स्कुल पठाउन मिल्छ ? १ दिनको उपचार पछि। एचाइभि एड्स वा क्यान्सर लागेका केहि व्यक्तिहरुलाई एकदमै कडा खालको लुतो पनि लाग्न सक्दछ। जसलाई पाप्रे लुतो "crusted scabies" पनि भनिन्छ। यसमा ठुलठुला रात सुकेका पाप्राहरू आइरहन्छन र यो साधारण लुतो भन्दा धेरै संक्रामक समस्या हो। अझै केहि जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिच्किचाउनुहोस।डा.बुडाल हाल टप केयर पोलिक्लिक,धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलवारीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ,
युवतीको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि -------:
तीव्र फैलँदै कोरोना स‌ंक्रमण, समुदायमै विस्तार